‘प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान (भिडियो) - Nepali in Australia
September 5, 2021 autherLeaveaComment on ‘प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान (भिडियो)
एजेन्सी – डाक्टर दीपा शर्माले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन् ; प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् ।तर दीपा वा सोशल मिडियासँग सम्बन्धित कसैलाई पनि यो अन्तिम क्षणहरू हुनेछन् भनेर सोचेकै थिएनन्।
डा दिपाको किन्नौरको पहिरोमा ज्यान गयो। यसमा आयुर्वेद डाक्टर दीपा शर्मा पनि थिइन् जसले आधा घन्टा अगाडि उनको तस्विर पोष्ट गरेर लेखेकी थिइन् प्रकृति बिना जिवन छैन भारत हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा आइतवार हृदय दर्दनाक दु’र्घटना भयो।
एक लामो समयको लकडाउनपछि, एक खुशीको समय बिताउन आएका पर्यटक प’हिरोमा परे । प’हिरोमा जम्मा नौ जनाको मृ’त्यु भयो। यसमा आयुर्वेद डाक्टर दीपा शर्मा पनि थिइन् जसले आधा घन्टा अगाडि उनको तस्विर पोष्ट गरेर लेखेकी थिइन् प्रकृति बिना जिवन छैन ।
आइतबार घ’टना हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिला उनले ट्वीटरमा एक तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले लेखिन् कि म अहिले भारतको अन्तिम बि’न्दुमा उभिएकी छु, जहाँसम्म साधारण ना’गरिकहरूलाई जान दिइन्छ। तिब्बत यसभन्दा ८० किलोमिटर अगाडि छ, जुन चीनले ओगटेको छ।
सोशल मीडियामा दीपाको तस्वीर मान्छेहरूले मन पराएका छन् । यस यात्राको आनन्द उनको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो, तर कसैलाई थाहा थिएन कि यो अन्तिम तस्वीर हो। सोशल मीडियामा उनका प्रशंसकहरू ३४ वर्षीया दीपा शर्माको आ-कस्मिक नि’धनबाट दु’खित बनेका छन् । भिडियो::
MCC ले बनाएको संरचना भत्काउन तालिम प्राप्त सश*स्त्र दस्ता तयार, ता*लिबा’नी जस्तै ल’ड्न तयार (हेर्नुहोस भिडियो)